bcmd · Global Voices teny Malagasy
Tantara mikasika ny bcmd
Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Karma Dupchu
Bhutan 16 Janoary 2014
Mampafantatra mpandray feo (podcaster) iray avy amin'ny tetikasa nahazo vatsy avy aminy ny Rising Voices. Nizara ny tantarany sy ny zava-niainany nahatonga azy ho liana tamin'ny fandraisam-peo ny tantara i Karma Dupchu ary hampiasa manontolo ny zavatra azony tamin'ny atrikasa.
Podcaster (Mpandray Feo) Asongadina: Jigme Tshewang
Bhutan 08 Janoary 2014
Niresaka ary nahafantatra an'i Jigme Tshewang ny Rising Voices, mpandray feo vaovao ary anisan'ny tetikasa nokarakarain'ny Foibe Bhutan Hoan'ny Media sy ny Demaokrasia, ary tohanan'ny RV ara-bola. Vakio ireo fijerin'i Jigme mikasika ity karazana fitantarana nomerika ity.
Manerana Izao Tontolo Izao Izahay! Sary Avy Any Amin'ireo Nahazo Famatsiam-bola Bitiky ny RV
Media sy Fanoratan-gazety 18 Oktobra 2013
Nirakitra ny tetikasan'izy ireo araka ny fivoarany ireo nahazo ny famatsia-bola bitiky ny Rising Voices eran-tany . Nisafidy sary vitsivitsy avy amin'ireo fijerena sary flickr, pejy Facebook ary vohikalan'izy ireo izahay, entinay mizara ny asa nataon'izy ireo nandritra ireo volana vitsy lasa.